efekethisiwe Mahhala basonta ngentambo yoboya - efekethisiwe elingenamikhono ke. efekethisiwe Bulk izindikimba yoboya - i uhlobo ngenalithi lasendulo. Namhlanje bemthanda abantu Ukugunda. Futhi hhayi ngaphandle isizathu, ngoba ukusetshenziswa leli fomu art ikuvumela ukubona emsebenzini ophelele owenziwa nguJesu njengoba isithombe bukhoma, sibonga emalungeni obalulekile kusuka ngomhla ka izindikimba ezahlukene futhi kuze kudabuke umhlane. Lapho edala noma yimuphi umkhiqizo kungenziwa uvolo ntambo kuhlangene ukotini, kasilika futhi ubuhlalu, nezinye izinhlobo ubucwebe.
Qala efekethisiwe yoboya ngentambo
Okokuqala udinga ukuthola intambo ofanele yoboya umkhiqizo. Ukuze embroider kwi ngendwangu, udinga ngentambo nge usayizi othile, efekethisiwe canopies, izikhwama, izicathulo - ngosayizi ezahlukene.
Indikimba ukhethwa imicu emibili noma emithathu. Eagle obuphelele amaphakathi, kunalokho nesigayegaye, isibambo eside futhi tip esicacile.
Isisekelo esakhiwe phakathi ayindilinga, isandla esimeni khulula. Uma umphetho kufanele kube uqweqwe, kubalulekile ukusebenzisa ezimbili ungqimba ngentambo kusengutsheni yoboya, uma ezicashile - ungqimba olulodwa. Lapho abathungela ngentambo, kuyatuseka ukusebenzisa hhayi ningi than ngamasentimitha amathathu nanhlanu. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi yaseZimbabwe babe nezinobunono le ntambo akusho ziguge kungaphazamisi ku inqubo yokusikwa.
Nakuba abasebenza efekethisiwe uvolo kufanele nakanjani zisebenzisa wax noma air conditioning. isicelo sabo ngeke unamathelise ngentambo futhi ugweme looping futhi layering imicu.
Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa efekethisiwe ngobuningi yoboya ngentambo
Isisetshenziswa ilula futhi ezithakazelisayo. Ukwehlukahluka kwezimangaliso yaseZimbabwe ungakha izingoma emangalisayo. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ukukhetha ezifanele umbala uvolo. A imibala akhethwe kahle ukusetshenziswa art elingavamile efekethisiwe kungadala isimo elikhulu, futhi ugxila ezweni of magic.
Ingemuva ababulawa kuba isihloko sesiqu, tambour uthunge noma efekethisiwe. inhlanganisela abathandwayo ingatholakala vdev inaliti amabili imicu imibala ehlukene. Imifekethiso yoboya ngentambo yinhle kakhulu uma isithombe ngokwaso ligcwele eyodwa uhlobo umthungo, edging futhi - nezinye.
Ivolumu imifekethiso ungakwazi ukuhlobisa ingaphakathi endlini. Ngenxa wakhe, izitshalo, izihlahla nezilwane uthole enengqondo.
efekethisiwe Ikakhulukazi voluminous wukuthi akunakwenzeka ukwenza iphutha. Ngisho noma into yenziwe kahle, kungaba ukulungiswa ngaphandle ukulimala komkhiqizo. Kunalokho, ngokuhamba kwesikhathi kungaba sihle futhi yasekuqaleni.
bephambene ngesikhathi efekethisiwe volumetric akubonakali. Ngakho-ke kwanele ukuba anqunywe iyiphi izindikimba ngokweqile ekupheleni umsebenzi. Kodwa kubalulekile ukuba athobele ukunemba labo zesithombe ezingenziwanga ithungwe.
Kunezinhlobo eziningana amalunga:
Contour. Lokhu kungabandakanya i-lomnyango, idla lubi, tambour kugaywe, zamakhorali, "phambili - inaliti emuva", pearl, bill ezivuzayo.
ayevumela Ukugcwalisa. Kuyinto ngqo Stitch, ulwembu, Ermine cross, imicibisholo ukundiza, amachashazi, izimpethu, ifindo isiFulentshi, okusanhlamvu.
Ukugcwalisa okuqinile. Lo mkhathi yobuciko, imbuzi, izitini.
cross Stitch ubuchwepheshe
Masters wayemthanda njalo lokuthunga esiphambanweni. Inikeza imikhiqizo eyindida futhi eyingqayizivele. ezinhle Ikakhulukazi eyatholakala kusukela usilika, viscose noboya lokuluhlaza.
Cross-Stitch izindikimba yoboya ubukeka nje langa. It ingasetshenziswa embroider imicamelo ahlukahlukene, izingubo zezingane, izicathulo, amathawula nokuningi. Amaphethini zingatholakala komagazini, ezincwadini noma ukuphrinta kukhompyutha yakho.
Imifekethiso ukuwela kuba nomphumela omuhle kumuntu. Kukhulisa likhono lekubhala yeminwe ekulinganiseni isimo sengqondo, aqede ukucindezeleka.
Funda indlela embroider a ubani engu- can. Into ebaluleke kakhulu - ukukwazi ukwenza yaseZimbabwe kuhle kucocekile. Umthetho eziyisisekelo Stitch rd ukuze embroider ngokuqinile indlela ethile, okokuqala wenza yaseZimbabwe engezansi, bese - elingenhla.
efekethisiwe ubuchwepheshe indwangu wathungela
Imifekethiso ku knits yoboya izindikimba - kunalokho eziyinkimbinkimbi, kodwa ngesikhathi esifanayo inqubo ezithakazelisayo. ungathola owokuqala esiyingqayizivele ezintweni evamile. Uma efekethisiwe evamile kwenziwa ngosizo the ayindilinga, kukhona akusetshenziswa. Indwangu wathungela ivame ukuba welulele ubude, ngakho ngeke ukwazi ukudonsa umkhiqizo kuzo zonke izinhlangothi futhi qinisa isikhumba. Kuyinto efiselekayo ukusebenzisa Esekelwa tricot ukuvimbela ukusikwa into.
Isici esivelele sesimiso efekethisiwe ku Indwangu wathungela wukuthi ungakwazi enta taba.
Ukudweba abeza kuwe kuqala ephepheni kufunwe, futhi naye kakade Indwangu wathungela. Iphethini kufanele kube encane.
Lapho edala ezivuzayo zokuhlobisa, ijezi ukuqinisa ozikhethela. I umphetho has a lokungcolisa encane, okuholela yokuthi indaba hhayi izinkontileka.
Indwangu ukuhlobisa ngempumelelo izimbali, kushiya wathungela kusiza efekethisiwe yoboya izindikimba. Izimbali ku ijezi kungenziwa nge efekethisiwe Rococo. Ziyakwazi kunalokho besiyoba sikhulu futhi kube enhle. Amacembe ithungwe "nge prikrepkoy iluphu" umbala Midway - umphetho nodular. Ungakwazi ukwengeza cabochons, ubuhlalu, amatshe, ubuhlalu nokunye.
On knitwear ngokuvumelanayo etholwe imifekethiso, Isiqu kanye tambour yaseZimbabwe.
Imifekethiso ku izingubo
Imifekethiso yoboya imicu on izingubo balujabulela njalo ithandwa enkulu phakathi okuyinhloko. Kwakucatshangwa ukuthi hhayi kuphela umbono elihle ngenalithi, kodwa kwakungandile uhlamvu isiko. amaphethini athile, amaphethini semantic, ngokuvumelana embroiderers, wakhonza njengentelezi nebandla okubi, kusuka kubantu okubi kuzo zonke ezimbi. Ezinye amaphethini kukhona ukuheha inhlanhla nengcebo endlini lowo othwala nengubo efekethisiwe.
Imifekethiso yoboya izindikimba etholwe ngempumelelo knitwear: sweaters ku, Jumpers, igqoka, izinto zezingane nokunye. Yandise esetshenziswa efekethisiwe efekethisiwe noma esiphambanweni.
umphetho "loop" lisetshenziswa izingubo akuyona zikhubazekile e inqubo efekethisiwe. Isetshenziselwa ezindaweni lapho eziyinkimbinkimbi ezifekethisiwe ngemihlobiso. Ukuphakama isakhiwo lomnyango efanelekayo knitwear, okuyinto kudala umphumela "ukunitha".
Chain Stitch uphelele Stocking ezihlobene izingubo-st.
Uphenyo ozungezayo efekethisiwe yoboya ngentambo
Kwi-inthanethi ungathola Izibuyekezo ehlukahlukene mayelana nokusetshenziswa lolu hlobo ngenalithi. Othile ecabanga ukuthi kuyikhono engavamile futhi uzama ukudala sinento yaso ehlukile enhle. Ukuze ezinye lokhu akulula. Kulabo abaye esiqaliwe ukwenza umbono efekethisiwe idatha, angaphakamisa into eyodwa: hhayi ukushiya umsebenzi.
Izitolo ukuthengisa eziningi amasethi ezahlukene oyifunayo iphethini, iphethini futhi ngenani lentengo elikahle.
Wishes sezisebenzi ezinamakhono
, Kumelwe ukuhlangabezana nemibandela elandelayo ukuthola elamukelekile futhi isithombe esinembile ngempela:
musa ukusheshe futhi qiniseka ukuqapha isikhundla kanye nokushuba wentambo;
zama ukuthola ohlangothini phambi kwesokunxele umkhiqizo kuhle, hhayi Engalungile;
ukusebenzisa conditioner emoyeni noma wax.
Lapho inqubo iphelile, udinga ukuthola umsebenzi ukuwasha noku-ayina. Ngempela kubalulekile ukukhumbula ukuthi ntambo yoboya kungaba umhlaba. Washable ngesandla emanzini afudumele usebenzisa powder ekhethekile kanye conditioner emoyeni. Iron kusuka ngaphakathi. Khona-ke, faka uzimele efanelekayo. Umsebenzi kwadinga ukubekezela okukhulu futhi okukhulu nokubekezela, kodwa umphumela kuwufanele.
Indlela yokwenza umshanelo kusuka ibhodlela plastic ngezandla zakhe